Bafuna ligeze umuzi iGcokama ngolwentatheli | Isolezwe
Bafuna ligeze umuzi iGcokama ngolwentatheli
Ezokungcebeleka / 11 May 2017, 09:09am / KHULEKANI MASEKO
IGCOKAMA Elisha lijaha intatheli yeLanga uMthobisi Sithole owathi galo yephuka emngcwabeni kaMthoko Xulu ongumlandeli weChalaha owashona kunomcimbi kamaskandi eThekwini. UMthandeni uxolisile ngesenzo sokushaya intatheli
BAFUNA ageze umuzi aphinde ahlawule umculi kamaskandi Igcokama Elisha ngokudedela ulabhabha wempama kwintatheli yeLanga ngesikhathi kunenkonzo yomngcwabo kaMnuz Mthoko Salabemkhuluma Xulu, eVuna kwaNongoma ngoMgqibelo.
UMnuz Muzi Xulu ongumfowabo kamufi obengumlandeli omkhulu kaMjikijelwa, uthe bengumndeni bebelindele ukuthi uMthandeni ‘Gcokama Elisha’ Manqele axolise ngesenzo sakhe sokuphakamisa isandla umndeni usazilele ukudlula kwelungu lawo.
“Ngesikhathi kufika abaculi sajabula ngoba kwaba yinto enhle ukuthi umndeni wesekwe abantu umfowethu abebathanda futhi elandela kakhulu umculo wabo. Kodwa azehlanga kahle izindaba zokuthi uMthandeni ashaye intatheli aze ayijahe emagcekeni omuzi. Ngikholwa wukuthi babengahlangana kwezinye izindawo lapho ababengaxoxa khona," kusho uXulu.
Uthe okube buhlungu kakhulu ngemuva kwesigameko wukuthi lo mculi akazange azihluphe ngokuxolisa noma akhombise ukuzisola.
“Udaba beluphuma emaphepheni kodwa angikaze ngibone ngisho umusho owodwa wokuxolisa emndenini. Ngingumlandeli kamasikandi futhi umculo wakhe siyawuthanda ekhaya kodwa isenzo sakhe sisishaqisile,” kusho uXulu.
Uphinde wakhwela wadilika kubaculi abebegqoke izigqoko phezu kwebhokisi lomfowabo wathi lokhu kuphambene nemfundiso yasemakhaya.
UMthandeni uvumile ukuthi ubengakabonani nomndeni wakwaXulu wathi usezinhlelweni zokuyozilahla kuwona ngoba lokhu akwenza kuyihlazo futhi kuphambana nendlela yokuziphatha komculi.
“Angithandi ukuphawula ngomndeni wakwaXulu ngoba ngiyalazi icala lami. Njengomuntu wasemakhaya ngiyazi ukuthi kumele ngilandele umkhuba ngixolise ngendlela efanele ngokuphakamisa isandla kungafanele. Ngihlela ukuvela emndenini maduze, wukuthi bengisabambekile.
Ngiyaxolisa ngokungenambandela kuwona wonke umuntu ngesenzo sami, ikakhulukazi ezintathelini. Isenzo sibi kakhulu futhi asihambisani nendlela engibukeka ngayo kubantu. Nakuba inhliziyo yami yaba buhlungu uma ngibona uSithole (Mthobisi weLanga) ngemuva kokubhala engihlanganisa nesigamseko engangingekho kuso kodwa zazikhona ezinye izindlela engangingazenza ukuvika lesi simo ngaphandle kokumehlisa isithunzi ngale ndlela,” kusho uMthandeni.
Unxuse bonke abantu ikakhulu abalandeli bomculo wakhe ukuthi bayeke ukugiya ngalesi senzo ezinkundleni zokuxhumana wathi asisihle futhi asihambisani nendlela azichaza ngayo kubantu.
“Mina ngiyiGcokama, angikwazi ukuthi ngithi ngizibiza ngeGcokama ngiphinde ngibe yisiqhwaga. Ngicela umphakathi ungixolele,” kuqhuba iGcokama.
USalabemkhuluma wadubuleka washona ngesikhathi kusuka isiyaluyalu emcimbini kamaskandi owawuseCurries Fountain emasontweni amabili adlule.
Ezinkundlei zokuxhumana isiphenduke indaba egudwini eyokushaya ngolabhabha intatheli waze wayijaha, abanye bathi kwakumele ishaywe ngenxa yezinto ezibhalayo.